Ebumnuche, Biko kpọchie Ogbe ọkụkọ | Martech Zone
Monday, October 2, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ozi na-emeghe ka iche:
Biko ahapụkwala ọkụkọ ọkụkọ gị ghere oghe n’oge ememme Halloween.
Biko hapukwala suki Chicken gi n’otu uzo mmadu nwere ike itinye ya n’enweghi onye ichoputara.
Biko hapukwala Udidi ọkụkọ gị ebe nwata dị afọ iri na asaa ga-enweta aka ya.
Biko ahapụla ọkụkọ ọkụkọ gị ebe nna nwere ike ịkụnye nwa ya nwoke dị afọ iri na asaa $ 17 iji tinye ọkụkọ ọkụkọ ma were ụkwụ buru ibu na gburugburu Super Target…
Obi ụtọ ụmụaka na-eti, "Mama, lee anya… ọ bụ Nwoke Ọkụkọ!".
Biko yipu uwe okuko Ọ gwụla ma ịchọrọ ka nna nna 17 chịrị ọchị nke ukwuu na ọ nwere ike ịnwụ site na nkụchi obi dịka nwa ya na-agbapụ aka ya Chicken Suit ma gbadaa n'ihu ụlọ ahịa ahụ.
Ebumnuche, biko kpọchie Ogbe ọkụkọ.
Ebee ka ọdịnaya?
Ọkt 2, 2006 na 8:36 PM
O yikarịrị ka ọ na-eme ọkụkọ ka mma karịa nwoke ahụ na-eguzo n'èzí carpark n'obodo ahụ na-enyefe mpempe akwụkwọ kwa ụtụtụ. Ee - yi uwe ọkụkọ.
Agụụ na-agụ m …
Ọkt 3, 2006 na 9:31 AM
Nke ahụ dị egwu. A ga-enwerịrị vidiyo maka nke a?!?!?! Biko Bill, kwuo na ị nwere ike nweta vidiyo maka nke a?!?!?
Ọkt 3, 2006 na 4:52 PM
Ị bụ nna onye dị afọ iri na asaa yi uwe ọkụkọ nke mere ka ụmụaka chịa ọchị na ọṅụ, Douglas? Nke ahụ dị mma karịa Santa Claus!
Ọkt 3, 2006 na 10:59 PM
Ee, abụ m nna. Nke ahụ bụ nwa m nwoke, Bill.
Ọkt 4, 2006 na 2:02 PM
Ọ gaara amasị m ịhụ ya. Nwa m nwoke nke okenye agaghị ahọrọ uwe ọkụkọ, mana ọ bụghị nke abụọ.